Indlwana yaseNorwegian Wood RRG. Kufuphi kuyo yonke into! - I-Airbnb
Indlwana yaseNorwegian Wood RRG. Kufuphi kuyo yonke into!
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAdam
IKhabhinethi ichazwe njenge "Ngomlingo, iCozy, enye enendalo, kunye neGem efihliweyo". Ngexesha lokuvalelwa yedwa kwe-Covid19 ngo-2020 abanini balungisa ikhaya ngaphandle kokungxama. Emva kokuncedisa i-rustic yeScandinavian kunye nezinto zangoku kunye nezinto eziluncedo, iKhabhinethi yayibizwa ngokuba yiNorwegian Wood. Ithiywe ngengoma yeBeatles yegama elifanayo. Ikhabhinethi Ikho ngokudibeneyo kunye nehlathi kunye ne-cliffside idala ingaphandle elimema ngokukhawuleza kwi-geological emangalisayo eyi-RRG.
Imithi yaseNorway ikwindawo enye kunye neendawo eziyingqongileyo. Izithuba ezingaphandle zichazwe kakuhle ekutyeni, ukuphumla kwi-spa / i-Hammock kwaye ukonwabela umlilo phakathi kwamatye achaza indawo yegumbi lomlilo. Ingaphakathi kwendawo inomxube we-eclectic ye-Modern kunye ne-Rustic decor enika i-vibe yaseScandinavia. Igcwele yonke into oyifunayo ukulala, ukupheka, ukutya kunye nokuphumla. Yonwabela i-perks yoncwadi olufanelekileyo lwasekhaya, ingqokelela yerekhodi ye-vinyl yequirky kunye nabanye abaninzi
4.93 · Izimvo eziyi-179
Isiseko esigqibeleleyo sasekhaya kuyo yonke into ye-RRG!
Yimizuzu emi-5 kuphela ukuya kwibhulorho yendalo.
Imizuzu emi-6 ukusuka kwipizza kaMiguel
8 imizuzu ukusuka Hops Fork
Imizuzu eyi-8 ukusuka kwitonela laseNada.
Trailheads ngaphakathi 10 imizuzu
Ndiyakwazi ukuphendula imibuzo ngelixa iindwendwe zikwisiza. Ndiza kwenza konke okusemandleni am ukuphendula ngokukhawuleza.